The World of Moe Thanzin: ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မရဲ့အလုပ်
စလုံးကို အလုပ်ရှာဖို့ရောက်လာတော့ အလုပ်မရမှာစိုးတဲ့စိတ်က နေ့နေ့ညညနှိပ်စက်တော့တာပဲ.. ကြုံဖူးသူတိုင်း သိပါတယ်.. တနေ့တနေ့ ရွတ်လိုက်ရတဲ့ဘုရားစာ.. လျှောက်လိုက်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလဲ တနေ့ကို အခု၁၀၀မကဘူး.. အင်တာဗျူးရပြီဆို ရင်တဖိုဖိုနဲ့ မိုးသည်းသည်းလဲမရှောင်နိုင်ဘဲ အရောက်လှမ်းရတာပေါ့... ကျွန်မရောက်ရောက်ချင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာက အင်တာနက်မရှိပါဘူး.. အိမ်နားက အင်တာနက်ဆိုင်လေးမှာ သွားပြီးအလုပ်လျှောက်ရတယ်.. သတင်းစာကို စောစောဝယ်.. သင့်တော်မယ့်အလုပ်လေးတွေရဲ့ လျှောက်ရမယ့် အီးမေးလ်လိပ်စာကို စာရွက်လေးတရွက်မှာကူးထားပြီး ဆိုင်ရောက်တာနဲ့ တန်းစီလျှောက်ပေါ့.. အလုပ်ခေါ်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေကို ၀င်ပြီးရှာရသေးတယ်.. တွေ့သမျှ အကုန်လျှောက်ပေါ့..
တနေ့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လျှောက်နေတုန်း ဖုန်းမြည်လာပါတယ်.. ကိုင်လိုက်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်း အင်တာဗျူးပါ.. နောက်နေ့မနက် ၈နာရီလာခဲ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်.. ကျွန်မက လိပ်စာမေးတော့ သတင်းစာထဲမှာပါတယ်လို့ ပြောပြီး ကုမ္ပဏီနာမည်ပဲ ပြောသွားပါတယ်.. ကျွန်မလဲ ကျန်တဲ့လျှောက်စရာတွေကို မြန်မြန်လျှောက်ပြီး အိမ်ပြန် သတင်းစာထဲမှာ ရှာကြည့်ရတာပေါ့.. မတွေ့ပါ.. သူပြောသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီနာမည်က ရှာလို့ကိုမရ.. အဲဒါနဲ့ ခုနကခေါ်ထားတဲ့နံပါတ်ကို ပြန်ဆက်လိုက်တယ်.. မိန်းကလေးတယောက်လာကိုင်ပါတယ်.. ခုနက လူကြီးတစ်ယောက် ငါ့ကို အင်တာဗျူးခေါ်ပြီး လိပ်စာတောင်းတာ မပေးပဲ ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ သတင်းစာထဲရှာခိုင်းတယ်.. ရှာမတွေလို့ လိပ်စာလေးပြောပြပါလို့မေးတော့ သူက ခုနကခေါ်တာ သူ့ဘော့စ်ဖြစ်မယ်တဲ့.. နင်ဘယ်ရှာတွေ့မလဲ ကြော်ငြာထဲမှာ ကုမ္ပဏီနာမည်မပါဘူးတဲ့လေ.. စိတ်တိုလိုက်တာအရမ်းပဲ.. လိပ်စာရလိုက်လို့ တော်သေးတာပေါ့..
နောက်နေ့ကျတော့ အစောကြီးထပြီး သွားလိုက်တယ်.. လိပ်စာကိုတော့ လွယ်လွယ်ကူကူရှာတွေ့ပြီး ၀င်ရမယ့်အပေါက်ရှာမတွေ့လို လည်နေတာနဲ့ ၉နာရီထိုးခါနီးမှ ရောက်သွားပါတယ်.. ဒါတောင် အကြာကြီးစောင့်လိုက်ရသေးတယ်.. ကျွန်မလျှောက်လိုက်တာက လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရာထူးပါ.. ခေါ်တာက သင်္ဘောကျင်းဆိုတော့ ရမယ်ကို မထင်တော့ဘူး.. သူတို့ကလဲ မှားပြီးခေါ်လိုက်တာတဲ့.. ရောက်လာမှတော့မထူးဘူး.. တခြားရာထူးတစ်ခု မိန်းကလေးနဲ့ကိုက်တာရှိတယ်.. ဖြေသွားလိုက်ပါဆိုလို့ ဖောင်တွေဘာတွေဖြည့်ပေါ့.. ဖြေရတဲ့ရာထူးက Planning Officer တဲ့.. ဘာမှန်းတောင်မသိဘူး.. အင်တာဗျူးမှာ မေးသမျှကို မသိဘူးချည်းပဲဖြေတာ.. သိမှမသိတာကို.. OHS Management System သိလားတဲ့.. ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး.. ISO ရောတဲ့.. ကြားတော့ကြားဖူးတယ်.. သေသေချာချာတော့ မသိဘူးပေါ့.. ရုံးခန်းထဲမှာပဲ ထိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ကြိုက်လားတဲ့.. Yes, of course ပေါ့.. ကြိုက်မှကြိုက်ပဲ.. ကျွန်မကိုဗျူးတာက မနေ့က ကျွန်မကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တဲ့ လူကြီးပဲလေ.. Human Resource Manager တဲ့.. နင်မသိတာတွေ သင်ပေးပါမယ်.. နင်လုပ်ကိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ငါယုံတယ် ဘာညာနဲ့ပြောလိုက်ပြီး သူဌေးဆီက Approval ယူပြီးရင် အကြောင်းကြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်..
နောက်တနေ့ကျတော့ အရင်သွားထားတဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုက နောက်တဆင့်ဗျူးဖို့ထပ်ခေါ်တာနဲ့ သွားရပါတယ်.. အင်တာဗျူးခန်းထဲရောက်နေတုန်း.. မနေ့ကဂျာကြီးက ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ခေါ်ပါတော့တယ်.. ဘယ်ဖုန်းကိုင်နိုင်ပါ့မလဲ.. အင်တာဗျူးပြီးတော့ သူတို့က အလုပ်ခန့်မယ်.. စ၀င်ဝင်ချင်း ဘယ်လောက်ပေးမယ်.. ၃လနေရင် ဘယ်လောက်ဖြင့်တိုးပေးမယ်လို့ညှိပါတယ်.. ကျွန်မလဲ မနက်ဖြန်မှအကြောင်းပြန်ပါရစေဆိုပြီး ပြန်ခဲ့ပါတယ်.. အပြန်လမ်းမှာ ဟိုဘက်က မန်နေဂျာကြီးကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တော့ ခုနက ဘာလို့ဖုန်းမကိုင်တာလဲလို့ မေးပါတယ်.. ကျွန်မက အမှန်အတိုင်းပြောလိုက်တော့ သူတို့က ဘယ်လောက်ပေးလဲလို့ မေးပါတယ်.. ပြောပြလိုက်တယ်.. ငါတို့ ၁၀၀ ပိုပေးပါမယ်.. မနက်ဖြန် S Pass တင်ပေးမယ် လာခဲ့ပါဆိုလို့ လက်ခံလိုက်မိတယ်.. အဲဒီတုန်းက Online တင်တာခောတ်မစားသေးတော့ စာတိုက်ကနေပဲတင်တာပေါ့.. အကြာကြီးစောင့်ရပါတယ်.. စိတ်ပူလိုက်ရတာလဲမပြောပါနဲ့.. ကိုယ်ရထားတဲ့ဘွဲ့နဲ့ တင်တဲ့ရာထူးနဲ့က ဘာမှမဆိုင်တာကြီးလေ..
တစ်လကျော်လောက်ကြာတော့ S Pass ကျလာပါတယ်.. ဆေးစစ်တာ ကဒ်ဖိုးသွင်းတာ ဘာမှ အိတ်စိုက်စရာမလိုဘူးလေ.. မဆိုးဘူးလို့တွေးမိတယ်.. အလုပ်စ၀င်တော့ ကျွန်မကို သင်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ ဂျာကြီးက ဖိုင်တွေအထပ်လိုက်ထိုးပေးပြီး ဖတ်ခိုင်းပါတော့တယ်.. ကျောင်းမှာတုန်းက ဆရာတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့အတူတူ စာဖတ်ပြီး သင်လာရတာမို့ တော်သေးတယ်ပြောရမယ်.. နားမလည်တာများရှိလို့ ဂျာကြီးကိုမေးမယ်မကြံနဲ့.. ငါလဲသေသေချာချာတော့မသိဘူး ဆိုတာနဲ့ပဲ တိုးရပါတော့တယ်.. သူ့ကျေးဇူးကြောင့် အင်တာနက်သုံးတာ တော်တော်ကျွမ်းသွားတယ်.. တနေ့တနေ့ စလုံးအစိုးရဌာနတွေရဲ့ စာမျက်နှာတွေကို ၀င်ကြည့်.. လိုအပ်တာတွေ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ.. အိမ်အထိယူသွားပြီးဖတ်ရတယ်.. ဂျာကြီးလွှတ်သမျှ သင်တန်ပေါင်းစုံလဲ တက်လိုက်ရတာအမောပဲ..
Safety Management System ဆိုတာဘာမှန်းနည်းနည်းသိခါရှိသေး Internal Audit လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဘာတွေမေးလို့ ဘာတွေစစ်ရမှန်းမသိ.. တတ်သာမတတ်သေးတာ လည်တော့လည်တယ်လေ.. Audit Plan ဆွဲတော့ ၀ါရင့်ကြီးတွေကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တင် အဖွဲ့တိုင်းမှာ ငယ်သားလိုက်လုပ်လိုက်တော့ သိသွားတယ်.. ဘယ်ဌာနကို ဘာတွေမေးရတယ်.. ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေစစ်ရတယ်ဆိုတာကိုပေါ့.. Internal Audit ပြီးလို့ ပေါ့သွားမယ်မထင်နဲ့ Management Review ဆိုတာက ကပ်ပါလာရော.. ၁နှစ်လုံးလုပ်ထားသမျှတွေကို Management က Review လုပ်တာပေါ့.. သူတို့ Review တာက ၂နာရီလောက်.. Review စရာတွေကို ပြင်ဆင်ရတာက ၂ပါတ်လောက်ကြာပါတယ်.. MR ပြီးသွားပြန်တော့ လာပါပြီ .External Audit. ကျရင်တော့သွားပြီပေါ့.. ကံများကောင်းချင်တော့ Minor Non-conformities လေးတွေ ၄ခုလောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်မအလုပ်ဝင်တာ ၆လပြည့်ပြီ.. အစမ်းခန့်ကနေ အတည်ခန့်ဖြစ်သွားပါတယ်.. လစာလဲ ၂၀၀ တိုးပေးတယ်ပေါ့.. ခိုင်းကောင်းမှန်းသိသွားပြီလေ.. နောက်ပိုင်းတော့ Safety နဲ့မဆိုင်တာတွေလဲ ကူလုပ်ပေးလာရပါတယ်.. လိုင်စင်တွေလျှောက်တာ Renew လုပ်တာ.. Work Permit တွေ S Pass တွေလျှောက်တာကအစ Admin ပိုင်းတွေအဆုံး လိုရင်လိုသလို ကူပေးရပါတော့တယ်..
မနှစ်က နှစ်လယ်လစာတိုးခါနီးကျတော့ Salary Administration ကိုကိုင်တဲ့ တရုတ်လေးက အလုပ်ထွက်သွားပါတယ်.. လုပ်မယ့်သူမရှိတာနဲ့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ကူညီလိုက်မိတာ Salary Administration တခုလုံး ကျွန်မလက်ထဲကိုရောက်လာပါတော့တယ်.. နှစ်ကုန်ကျရင် ၁၃လစာပေးဖို့.. ဆုကြေးတွေတွက်ဖို့.. ပထမနှစ်ပတ်လည်မှာ လစာတိုးပေးဖို့ အားလုံးလုပ်ရပါတော့တယ်.. လူ ၃၅၀စာလောက်ဆိုတော့ တော်သေးတယ်ပြောရမှာပေါ့.. ၁၀၀၀စာလောက်ဆိုရင်တော့ သေပြီဆရာပဲ.. Excel မှာသုံးတဲ့ Formula တွေ.. Words Document နဲ့တွဲပြီး Mail Merge လုပ်တာတွေ စုံနေအောင်လေ့လာရတယ်.. အသိပညာတိုးတာတော့အမှန်.. ခေါင်းစားရတာလဲအရမ်းပဲ.. မှားသွားရင် အထုခံရမှာမို့ သတိထားနေရတာကြီးက တော်တော်ဆိုးပါတယ်.. တစ်နှစ်စာလုပ်ပြီးသွားတော့ တော်တော်လေးနေသားကျသွားတယ်ဆိုရမယ်..
ဒီနှစ် နှစ်လည်လစာတိုးတဲ့အစီအစဉ်မှာ ကျွန်မကို ရာထူးတိုးပေးပါတယ်.. Senior Planning Officer တဲ့.. လစာလဲ ၂၅၀တိုးသွားတယ်ပေါ့.. အကြံအစည်တစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်လို့ ခေါင်းတော့ခပ်ကျိမ်းကျိမ်းဖြစ်နေတုန်း ဒီမနက် ဌာနတွင်း Discussion အပြီးမှာ တရားဝင်ကြေငြာပါတော့တယ်.. ခုကစပြီး Salary Administration ကို လုံးဝတာဝန်ယူရပါမယ်တဲ့.. ဘယ်သူလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် လစာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး တခုခုမှားခဲ့ရင် ကျွန်မက တာဝန်ယူရပါမယ်တဲ့လေ.. လူမိုက်ငှားလိုက်ပါပြီ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးပေးထားတဲ့လစာလေးမျက်နှာနဲ့ လုပ်ကိုလုပ်ရပါတော့မယ်.. ကျန်တဲ့သကောင့်သားတွေလုပ်သမျှကိုလဲ မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေရပါတော့မယ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ ဆုတောင်းပေးလိုက်မိတယ်.. “ကံကောင်းပါစေပွင့်မြူးဇင်ရေ”လို့...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 11:05 AM
ရာထူးတက်၊ လစာတိုး ဆိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ရပြီး လစာလည်း မှန်မှန်တိုးပါစေ ...း)
ကွန်ဂရက်ကျူရေးရှင်းးးးးးးးးနော်မမ...လုပ်ရသလောက်..အကျိုးခံစားခွင့်ရှိရင်....နေပျော်ပါတယ်နော်...။ မြန်မာတွေ တော်တယ်လို့ အလုပ်ထဲမှာကြားရရင်..အရမ်းအားရှိတာပဲ။း)
ညီမရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို သိလို့ အခုလို တာဝန်တွေ ပေးတာပေါ့... တာဝန်ယူရတာ ခေါင်းကြီးပေမယ့် ကိုယ့်ကို အသိအမှတ်ပြုနည်း တမျိုးမို့ ကျေနပ်စရာပါ ညီမရေ...
နောက်ကို ဒီ့ထက် အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်နော်...း))
congratulation and best luck :)
P.S. good luck ထက်ပိုကံကောင်းအောင်
မတန်ဘူးထင်တာဘဲ. ခိုင်းတာက ပိုများနေတယ်။
အသက်ကလေး နစ်ဆယ့်ရှစ်နဲ့ဒီလောက်ခရီးပေါက်နေရင်တော့လဲရှေ့ဆက်အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။
I think I was at the same place while your HR Manager phoned you.If I am not wrong, you were sitting for second interview of an Automation Controls company.